Handray anjara koa i Lija: hitondra ny “rock symphonique” ry Kiaka sy Tselatra | NewsMada
Handray anjara koa i Lija: hitondra ny “rock symphonique” ry Kiaka sy Tselatra
Sambany hiaka-dapa! Miketrika ary mampanantena seho miavaka ry Kiaka sy Tselatra, anatin’ny “Mifampitantana”…
Anisan’ny handray anjara i Lija! Vaovao lehibe ho an’ny mpankafy ny rock manokana, indrindra ireo nanaraka ny tarika Tselatra hatramin’izay izany. Vaovao lehibe faharoa, haka endrika “rock symphonique”, ny fampisehoana “Mifampitantantana”, iarahana amin’ny tariaka Kiaka sy ny tarika Tselatra, etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina, ny alahady 3 marsa ho avy izao.
“Mikaroka ny tsara kokoa hatrany mba hatolotra ny mpankafy izahay, teraka teo ny hevitra hanao fampisehoana “rock symphonique”. Sambany hiaka-dapa ity endri-pampisehoana ity, ka hanentananay dieny izao sahady ny mpankafy”, hoy ny nambaran’i Tantely Ralalarison, avy ao amin’ny Live Prod, miandraikitra ny fikarakarana.
efa ao anatin’ny fanomanana tanteraka ireo mpankanto “hifampitantana”. Niantso mpitendry mpiangaly ireo zavamaneno misy tadiny izy ireo hanatevina ny tarika Kiaka sy ny tarika Tselatra, hanome izay loko katsahina izay.
Tsara ary nampihetsi-po ny “Rock mandrakizay”, niarahana tamin’ireo tarika ireto tao Antsahamanitra, saingy mbola endri-tseho hafa koa ity anatin’ny “Mifampitantana” ity.